Qandaraaska Dhismaha Southwind: Biyo-goynta iyo Bixinta
Source: VIRGINIA POWER CO. - Xarunta Chesterfield Station Virginia
Shirkadda Dhismaha Southwind (SWC) waxaa qandaraas lagu siiyey inuu u sameeyo khad wax u dhisaya shirkadda Tamarta ee Virginia saddex (3) goobood oo gooni u ah iyada oo wadar ahaan ka saarista dambaska laga soo bilaabo 400,000 cubic yaardi illaa hal milyan oo mitir cubic Station ah.
A 14-inch Ellicott® Brand B-890 “Wheel-Dragon” red dredge waxaa loo isticmaalay in si hufan (iyo qiimo-wax ku ool ah) looga saaro dambaska hal basin oo alaabada lagu qaado iyada oo loo marayo tubbo-biyoodyo weelka kaydinta ah. Daahyada jilicsan ayaa loo adeegsaday si loo xakameeyo adkaha adag ee la joojiyay loona yareeyo jahwareerka barta dheecaanku ka soo baxayo ee loo maro James River. Intaa waxaa sii dheer, xaaladaha sinnaanta ee weelka kaydinta ayaa xumaaday cimilada oo culus awgeed; Shaqaalaha SWC waxay kormeerayeen heerarka biyaha waxayna xakameeyeen cadaadiska saaran wadada iyagoo jaangooyay heerka dheecaanka biyaha waxayna siinayaan labo (2) 10 ”bambooyin. Mashruuca ayaa si guul leh loogu dhammeeyay waqtigii loogu talagalay iyo miisaaniyadda.
Macmiilka Qarsoodiga ah
SWC waxay, lix jeer oo kaladuwan, si guul leh u dhamaystirtay qodaya balliyada dambaska iyo agabka si loo fududeeyo qashin damis lagu rido goob qashin la oggol yahay. Shaqada waxaa ka mid ahaa abaabul iyo daad-gureyn, qashin qubka, iyo levee iyo dhisida xarkaha diikha. Dhamaan shaqooyinka waxaa lagu qabtay si adag iyadoo la raacayo qeexitaanka macmiilka iyo nidaamyada kormeerka tayada, wakaaladaha sharci dejinta ee gobolka iyo federaalka, iyo falsafada Southwind ee Wadarta Maamulka Tayada.
Ku Bilaab Mashruuca Bixinta Ash-Dhuxushaada Ellicott